ग्रिनकार्ड आएन ? धेरै नकुरेर अपनाउनुहोस् यी पाँच तरिका « Khasokhas
ग्रिनकार्ड आएन ? धेरै नकुरेर अपनाउनुहोस् यी पाँच तरिका
पहिलो तपाईले अनलाइनमार्फत युएससीआईएसमा अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि तपाईले यो लिंकमा गएर आफ्नो केसको बारेमा युएससीआईएसलाई सचेत गराउन सक्नुहुनेछ । यदि तपाईको केसबारे निर्णय हुन युएससीआईएसले तोकेको भन्दा धेरै समय लागेको छ भने यो विधिबाट तपाईले आफ्नो केसमा छिटो निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ ।
तेश्रो तपाईले युएससीआईएसको यो लिंकमा गएर इन्फोपास अप्वाइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ । अप्वाइन्टमेन्ट लिएर युएससीआईएसको फिल्ड अफिसमा गएर आफ्नो केसबारे सोधखोज गर्न सक्नुहुनेछ ।